Drugstore Drones: UPS Will Fly CVS Prescriptions to Customers | Myanmar Business Today
Home MMBIZ News Drugstore Drones: UPS Will Fly CVS Prescriptions to Customers
Vol , Issue 43
FILE PHOTO: A UPS drone makesaFlight Forward medical delivery on WakeMed Health & Hospitals’ main campus in Raleigh, North Carolina, U.S. in an undated photo. UPS/Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY/File Photo
In addition, the company said pharmaceutical distributor AmerisourceBergen Corp will use Flight Forward drones to move pharmaceuticals, supplies and records select U.S. medical campuses it serves.UPS rival FedEx Corp last week deliveredaresidential package toahome in Christiansburg, Virginia, as part ofatrial service with Alphabet’s Wing Aviation.
United Parcel Service Inc ၏ Flight Forward မောင်းသူမဲ့ လေယာဥ်များ မကြမီတွင် CVS Health Corp ထံမှ ဆေးဝါးများ အိမ်အရောက်ပေးပို့သည့် ဝန်ဆောင်မှုကို မကြာမီ စတင်လုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လာမည့် သတင်းပတ်များအတွင်း အမေရိကန်မြို့ကြီး တစ်မြို့ သို့မဟုတ် နှစ်မြို့တွင် စတင်သွားမည့် အဆိုပါ ဝန်ဆောင်မှုသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံးသော ပါဆယ်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်သည့် United Parcel Service Inc အနေဖြင့် ဒရုန်းဖြင့် ပို့ဆောင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ဆေးရုံးဝင်းများအပြင်ဘက်သို့ ချဲ့ထွင်လာနေသည့် အချက်ကို ဖော်ပြနေသည်။
လေယာဥ်ပေါင်း ၂၅၁ စင်း၊ ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးလေယာဥ် ၃၀၀ ကျော် ပိုင်ဆိုင်သော အဆိုပါ ကုမ္ပဏီ၏ Chief Strategy and Transformation Officer ဖြစ်သူ Scott Price က “Flight Forward အနေနဲ့ အရေးကြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစိန်ခေါ်မှုတွေအတွက် ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေကို ဖန်တီးဖော်ထုတ်ဖို့အတွက် သုံးစွဲသူအသစ်တွေနဲ့ ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်သွားမှာပါ” ဟု ပြောသည်။
ယခုလတွင် UPS သည် အမေရိကန်အစိုး၏ မောင်းသူမဲ့လေယာဥ်လိုင်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို ရရှိခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ ရရှိလိုက်ခြင်းကြောင့် Amazon.com နှင့် Alphabet Inc ၏ Wing တို့ကဲ့သို့သော ပြိုင်ဘက်များကို အနိုင်ရသွားသည်။
အစိုးရတာဝန်ရျိသူများအနေဖြင့် လူလိုက်ပါခြင်းမရှိသော လေယာဥ်များ အမေရိကန်တွင် မည်သို့ ပျံသန်းဝန်ဆောင်မှုပေးရမည်ဆိုသည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေများ ရေးဆွဲနေကြပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ထွက်ပေါ်လာရန် ခန့်မှန်းထားသည်။
Previous articleBoeing May Face Billions More in Losses as MAX Crisis Deepens
Next articleGoing Overboard? Shipping Rules Seen Shifting Pollution From Air to Sea